၁၁လသား ဘဘေီလေးအတှကျ လလေ့ာသငျယူခွငျး လှုပျရှားမှု (၃)မြိုး - Lifestyle Myanmar
Home Family ၁၁လသား ဘဘေီလေးအတှကျ လလေ့ာသငျယူခွငျး လှုပျရှားမှု (၃)မြိုး
၁၁လသား ဘဘေီလေးအတှကျ လလေ့ာသငျယူခွငျး လှုပျရှားမှု (၃)မြိုး
အသကျ ၁၁လအရှယျဟာ သားသားမီးမီးတို့ရဲ့ ဘဝမှာ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတတျမှု အမွနျဆုံးအရှယျပါ။ ဒီအရှယျမှာ အကူအညီမလိုဘဲ သူ့ဘာသာသူ မတျတပျရပျနိုငျလာပွီး လမျးစလြှောကျတတျနပေါပွီ။ ဒီအရှယျမှာ သားသားမီးမီးတှဟော ရခှေကျကိုမွဲမွဲကိုငျပွီး သူ့ဘာသာသူ သောကျတတျဖို့ သငျယူပါတယျ။ ဘဘေီလေး ၁၁လသားအရှယျကို ရောကျပွီဆိုရငျ အောကျပါအခကျြတှကေို လုပျနိုငျစှမျးရှိလာပါပွီ။ သို့သျောလညျး ကလေးတှဟော ကိုယျပိုငျနှုနျးထားအတိုငျး ဖှံ့ဖွိုးတာကွောငျ့ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ ဖှံ့ဖွိုးပုံမတူညီတာကို သတိရဖို့လိုပါတယျ။
ဒီအသကျအရှယျမှာ ဘဘေီလေးတှဟော တဈခုခုတောငျးတဲ့အခါ လကျနှငျ့ညှနျပွတာ သို့မဟုတျ အမူအရာနှငျ့ လုပျပွပါလိမျ့မယျ။ ဖဖေေ့၊ မမေဆေို့တဲ့ စကားလုံးအတိုလေးတှေ ပွောတတျလာပါပွီ။ ခှကျထဲကနေ နညျးနညျးခငျြးစီ စုပျသောကျတတျနပေါပွီ။ လကျတဈဖကျထဲကိုငျပွီး လမျးလြှောကျနတေတျပါပွီ။
၁၁လသားအရှယျကလေးတှအေတှကျ လလေ့ာသငျယူခွငျး လှုပျရှားမှု ၃မြိုး
၁၁လသားအရှယျဟာ အငွိမျမနကွေသလို ခပျဆိုးဆိုးလေးတှေ ဖွဈတာကွောငျ့ သူတို့ကိုလိုကျထိနျးရတဲ့ မမေတေို့ အတှကျ စိတျမရှညျခငျြစရာပါနျော။ ဒီအသကျအရှယျမှာ သားသားမီးမီးတှဟော မမေတေို့ရဲ့ အာရုံစိုကျမှုကို လိုအပျဆဲပါ။ သူတို့ရဲ့နစေ့ဉျလှုပျရှားမှုမြားမှာ သူတို့ပတျဝနျးကငျြက ကမ်ဘာကွီးကို စူးစမျးခွငျး ပါဝငျပါတယျ။ ဒီအခြိနျမှာ အမွငျ့ပျေါက ပွုတျကတြာ၊ အပူလောငျတာစတဲ့ အန်တရာယျရှိတဲ့ အခွအေနတှေကေ သူတို့ဆီကို ရောကျရှိနိုငျတာကွောငျ့ မမေတေို့က သတိထားဖို့လိုအပျပါတယျ။
၁။ သငျ့ဘဘေီလေးရဲ့ အစာစားတဲ့ အလအေ့ကငျြ့
မမေတေို့ရဲ့ ၁၁လသားဘဘေီလေးဟာ လကျခြောငျးလေးတှလေိုပဲ ဇှနျးနဲ့ သူ့ဘာသာသူ ကိုငျစားနိုငျစှမျး ရှိလာပါပွီ။ ဒီအရှယျကလေးရဲ့အစားအသောကျထဲမှာ အစားမာ ထညျ့ကြှေးလို့ရပွီဆိုပမေယျ့ အာဟာရအမြားဆုံးပါဝငျတဲ့ အစားအစာတှေ ဖွဈဖို့လိုပါတယျ။ နို့ထှကျပစ်စညျးမြား၊ ဟငျးသီးဟငျးရှကျမြားနှငျ့ သဈသီးမြားကို မြှတအောငျ ကြှေးသငျ့ပါတယျ။
တဈနလေုံ့း အငွိမျမနတေဲ့ သားသားမီးမီးတှကေို စှမျးအငျလုံလောကျအောငျ မနကျခငျးနှငျ့ နလေ့ယျခငျးမှာ မုနျ့ပေးနိုငျပါတယျ။ သူတို့အတှကျ ပြျောစရာကောငျးတဲ့ အစားစားခြိနျဖွဈစဖေို့ မတူညီတဲ့ အရသာမြားကို ထညျ့ကြှေးခွငျးဖွငျ့ အရသာရဲ့ အသိကို မွနျမွနျဖှံ့ဖွိုးစပေါတယျ။ မမေတေို့ကလေးက အစားဇီဇာကွောငျသူ ဖွဈရငျတော့ စားဖို့ အတငျးအကပျြမကြှေးသငျ့ပါဘူး။
၂။ သငျ့ဘဘေီလေးရဲ့ communication skills
ဒီအခြိနျမှာ ကလေးတှရေဲ့ နားလညျသဘောပေါကျမှုဟာ တမူထူးခွားပါတယျ။ ဒီအဆငျ့မှာ ကွိုကျတယျ/မကွိုကျဘူး ဆိုတဲ့အသိ ဖှံဖွိုးပါလိမျ့မယျ။ ဒီအဆငျ့မှာ သူတို့ ဘယျလို ဆကျသှယျပွောဆိုသလဲ?
သူအကွိုကျဆုံး အရုပျကိုရဖို့ ဒေါသထှကျပွီး ဝုနျးဒိုငျးကွဲလြှငျ မမေတေို့က စိတျအေးအေးထားပါ။
ဒီအရှယျမှာ “ဘူး” ဆိုတဲ့အငွငျးစကားကို တှငျတှငျသုံးတတျပါတယျ။ မမေကေ စားမလားမေးရငျ စားဘူး၊ အိပျမလား မေးရငျ အိပျဘူး စသဖွငျ့ ကလေးတှေ မကွာခဏပွောတတျကွပါတယျ။ ဒီအခြိနျမှာ သူတို့ရဲ့ အာရုံစူးစိုကျမှု spans ဟာ တိုးတတျနပွေီဖွဈပွီး အရာဝတ်တုတဈခု သို့မဟုတျ ဂိမျးပျေါမှာ ပိုပွီး အာရုံစိုကျပါတယျ။
၃။ စာဖတျခွငျးကို နှဈသကျပါတယျ
မမေ့ေ့ ပေါငျပျေါမှာတငျပွီး စာဖတျပွတဲ့အခြိနျကို ဘဘေီလေး နှဈသကျပါတယျ။ ဒါကတော့ ၁၁လသားအရှယျ ဘဘေီလေးရဲ့ activities မြားကို ကွိုးစားပေးဖို့ အကောငျးဆုံးတဈခုဖွဈပါတယျ။
စာမကျြနှာတှေ ဖှငျ့တာ သငျ့ယူဖို့ အကောငျးဆုံးနညျးလမျးတဈခု ဖွဈပါတယျ။
သူက ရုပျပုံတှကေို လကျနဲ့ညှနျပွပါလိမျ့မယျ။
စာဖတျပွခွငျးက သငျ့ကလေးနှငျ့ ထိတှဆေ့ကျဆံဖို့ အကောငျးဆုံးနညျးလမျးတဈခု ဖွဈပါတယျ။
စကားလုံးတဈလုံး၊ စာကွောငျးတဈကွောငျးကို သူညှနျပွတဲ့အခါ စကားလုံးမြားကို ဖွညျးဖွညျး ရှတျပွပေးပါ။
တူညီတဲ့ စကားလုံးတှကေို သူမကွာခငျမှာ ထပျခါထပျခါ စရှတျနိုငျပါတယျ။ ပုံမှနျစာဖတျပွခွငျးအလအေ့ထဟာ သူ့ရဲ့ သိမွငျမှုစှမျးရညျကို ဖှံ့ဖွိုးစပွေီး စာအုပျမွငျရငျ စူးစမျးပွီး လှနျတတျတဲ့အကငျြ့ ရသှားပါလိမျ့မယျ။
၁၁လသား ဘေဘီလေးအတွက် လေ့လာသင်ယူခြင်း လှုပ်ရှားမှု (၃)မျိုး
အသက် ၁၁လအရွယ်ဟာ သားသားမီးမီးတို့ရဲ့ ဘဝမှာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်မှု အမြန်ဆုံးအရွယ်ပါ။ ဒီအရွယ်မှာ အကူအညီမလိုဘဲ သူ့ဘာသာသူ မတ်တပ်ရပ်နိုင်လာပြီး လမ်းစလျှောက်တတ်နေပါပြီ။ ဒီအရွယ်မှာ သားသားမီးမီးတွေဟာ ရေခွက်ကိုမြဲမြဲကိုင်ပြီး သူ့ဘာသာသူ သောက်တတ်ဖို့ သင်ယူပါတယ်။ ဘေဘီလေး ၁၁လသားအရွယ်ကို ရောက်ပြီဆိုရင် အောက်ပါအချက်တွေကို လုပ်နိုင်စွမ်းရှိလာပါပြီ။ သို့သော်လည်း ကလေးတွေဟာ ကိုယ်ပိုင်နှုန်းထားအတိုင်း ဖွံ့ဖြိုးတာကြောင့် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဖွံ့ဖြိုးပုံမတူညီတာကို သတိရဖို့လိုပါတယ်။
ဒီအသက်အရွယ်မှာ ဘေဘီလေးတွေဟာ တစ်ခုခုတောင်းတဲ့အခါ လက်နှင့်ညွှန်ပြတာ သို့မဟုတ် အမူအရာနှင့် လုပ်ပြပါလိမ့်မယ်။ ဖေဖေ့၊ မေမေ့ဆိုတဲ့ စကားလုံးအတိုလေးတွေ ပြောတတ်လာပါပြီ။ ခွက်ထဲကနေ နည်းနည်းချင်းစီ စုပ်သောက်တတ်နေပါပြီ။ လက်တစ်ဖက်ထဲကိုင်ပြီး လမ်းလျှောက်နေတတ်ပါပြီ။
၁၁လသားအရွယ်ကလေးတွေအတွက် လေ့လာသင်ယူခြင်း လှုပ်ရှားမှု ၃မျိုး
၁၁လသားအရွယ်ဟာ အငြိမ်မနေကြသလို ခပ်ဆိုးဆိုးလေးတွေ ဖြစ်တာကြောင့် သူတို့ကိုလိုက်ထိန်းရတဲ့ မေမေတို့ အတွက် စိတ်မရှည်ချင်စရာပါနော်။ ဒီအသက်အရွယ်မှာ သားသားမီးမီးတွေဟာ မေမေတို့ရဲ့ အာရုံစိုက်မှုကို လိုအပ်ဆဲပါ။ သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများမှာ သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်က ကမ္ဘာကြီးကို စူးစမ်းခြင်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ အမြင့်ပေါ်က ပြုတ်ကျတာ၊ အပူလောင်တာစတဲ့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အခြေအနေတွေက သူတို့ဆီကို ရောက်ရှိနိုင်တာကြောင့် မေမေတို့က သတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
၁။ သင့်ဘေဘီလေးရဲ့ အစာစားတဲ့ အလေ့အကျင့်
မေမေတို့ရဲ့ ၁၁လသားဘေဘီလေးဟာ လက်ချောင်းလေးတွေလိုပဲ ဇွန်းနဲ့ သူ့ဘာသာသူ ကိုင်စားနိုင်စွမ်း ရှိလာပါပြီ။ ဒီအရွယ်ကလေးရဲ့အစားအသောက်ထဲမှာ အစားမာ ထည့်ကျွေးလို့ရပြီဆိုပေမယ့် အာဟာရအများဆုံးပါဝင်တဲ့ အစားအစာတွေ ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ နို့ထွက်ပစ္စည်းများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့် သစ်သီးများကို မျှတအောင် ကျွေးသင့်ပါတယ်။
တစ်နေ့လုံး အငြိမ်မနေတဲ့ သားသားမီးမီးတွေကို စွမ်းအင်လုံလောက်အောင် မနက်ခင်းနှင့် နေ့လယ်ခင်းမှာ မုန့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သူတို့အတွက် ပျော်စရာကောင်းတဲ့ အစားစားချိန်ဖြစ်စေဖို့ မတူညီတဲ့ အရသာများကို ထည့်ကျွေးခြင်းဖြင့် အရသာရဲ့ အသိကို မြန်မြန်ဖွံ့ဖြိုးစေပါတယ်။ မေမေတို့ကလေးက အစားဇီဇာကြောင်သူ ဖြစ်ရင်တော့ စားဖို့ အတင်းအကျပ်မကျွေးသင့်ပါဘူး။
၂။ သင့်ဘေဘီလေးရဲ့ communication skills
ဒီအချိန်မှာ ကလေးတွေရဲ့ နားလည်သဘောပေါက်မှုဟာ တမူထူးခြားပါတယ်။ ဒီအဆင့်မှာ ကြိုက်တယ်/မကြိုက်ဘူး ဆိုတဲ့အသိ ဖွံဖြိုးပါလိမ့်မယ်။ ဒီအဆင့်မှာ သူတို့ ဘယ်လို ဆက်သွယ်ပြောဆိုသလဲ?
သူအကြိုက်ဆုံး အရုပ်ကိုရဖို့ ဒေါသထွက်ပြီး ဝုန်းဒိုင်းကြဲလျှင် မေမေတို့က စိတ်အေးအေးထားပါ။
ဒီအရွယ်မှာ “ဘူး” ဆိုတဲ့အငြင်းစကားကို တွင်တွင်သုံးတတ်ပါတယ်။ မေမေက စားမလားမေးရင် စားဘူး၊ အိပ်မလား မေးရင် အိပ်ဘူး စသဖြင့် ကလေးတွေ မကြာခဏပြောတတ်ကြပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ သူတို့ရဲ့ အာရုံစူးစိုက်မှု spans ဟာ တိုးတတ်နေပြီဖြစ်ပြီး အရာဝတ္တုတစ်ခု သို့မဟုတ် ဂိမ်းပေါ်မှာ ပိုပြီး အာရုံစိုက်ပါတယ်။
၃။ စာဖတ်ခြင်းကို နှစ်သက်ပါတယ်
မေ့မေ့ ပေါင်ပေါ်မှာတင်ပြီး စာဖတ်ပြတဲ့အချိန်ကို ဘေဘီလေး နှစ်သက်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ၁၁လသားအရွယ် ဘေဘီလေးရဲ့ activities များကို ကြိုးစားပေးဖို့ အကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
စာမျက်နှာတွေ ဖွင့်တာ သင့်ယူဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
သူက ရုပ်ပုံတွေကို လက်နဲ့ညွှန်ပြပါလိမ့်မယ်။
စာဖတ်ပြခြင်းက သင့်ကလေးနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
စကားလုံးတစ်လုံး၊ စာကြောင်းတစ်ကြောင်းကို သူညွှန်ပြတဲ့အခါ စကားလုံးများကို ဖြည်းဖြည်း ရွတ်ပြပေးပါ။
တူညီတဲ့ စကားလုံးတွေကို သူမကြာခင်မှာ ထပ်ခါထပ်ခါ စရွတ်နိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်စာဖတ်ပြခြင်းအလေ့အထဟာ သူ့ရဲ့ သိမြင်မှုစွမ်းရည်ကို ဖွံ့ဖြိုးစေပြီး စာအုပ်မြင်ရင် စူးစမ်းပြီး လှန်တတ်တဲ့အကျင့် ရသွားပါလိမ့်မယ်။
Previous articleအဆိုတျောရဲ့ တကယျ့ဘဝအတှအေ့ကွုံတှပေျေါမှာ အခွခေံပွီး ရေးခဲ့တဲ့ K-Pop သီခငျြးမြား
Next articleမမေတေို့ကို တခဏလေးတောငျမှ အနားမပေးနိုငျကွောငျး သကျသပွေုထားတဲ့ ဘဘေီတို့ရဲ့ ဓါတျပုံလေးတှေ